नेपाल आज | वौद्धिकता चोरीमा जोशीको नाम, अनाहकमा चेलीको किन अपमान ?
न्यूज २४ टेलिभिजनवाट विदा लिएपछि रवी लामीछानेले र सञ्चालक अनिल जोशीका विचमा ‘सिधाकुरा जनतासँग’ को ट्रेडमार्कका विषयमा समस्या देखियो।
‘सिधा कुरा जनतासँग’ लाई थप परिस्कृत गरेर लिएर आउने वाचा गरेका लामिछानेलाई सञ्चालक जोशीले समस्यामा पार्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि दुवै विच आउन सक्ने तनाव स्पष्ट देखिएको छ ।
योसँगै आलोचनाको भागिदार वेनकी छिन् प्रस्तोता सम्झना भुजेल । रवीले टेलीभिजन छोडेपछि ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आएकी भुजेललाई रवीसँग तुलना गरेर आलोचना गर्ने गरिएको छ । आलोचकहरुका अनुसार उनको प्रस्तुती रवीको तुलनामा फिक्का देखिएको छ। यदि आलोचनाको विषय प्रस्तुतीको मात्रै हो भने यसलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । तर, सञ्चालकको दोष प्रस्तोतामाथि पार्न खोजीएको हो भने चै उनी माथि अन्याय ठहर्ने जानकारहरु वताउँछन् ।
‘भुजेलले विशुद्ध सञ्चार कर्म गरेकी हुन । उनले आफनो तर्फवाट प्रयास पनि राम्रो गरेकी छिन’ एक सञ्चारकर्मी भन्छन्–‘आजको भन्दा भोली राम्रो गर्ने ठाउँ छ, किन उनको आलोचना ?’ टेलीभिजन सञ्चालकले गरेको गल्तिमा कार्यक्रम प्रस्तोतालाई तारो वनाउन नहुने उनको वुझाई छ ।
न्यूज २४ले रवी लामिछानेको वौद्धिक्ता चोरी गरेको आक्रोश प्रस्तोतामाथि उतार्न खोजिएको भन्दै उनले प्रतिरक्षा गरेका छन् । ‘प्रस्तोताले लगाए/अह्राएको काम गर्ने हो, त्यसमा उनको कुनै दोष छैन’–उनले भने ।
रवि लामिछानेको भदौ ८ गतेको अन्तिम एपिसोडपछि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भुजेललाई नियुक्त गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ कार्यक्रमको ट्रेडमार्कका विषयमा ठुलै समस्या हुने आशंका गर्न थालिएको छ । पत्रकार प्रेम वानियाँले पनि यो विषयलाई आंकलन गरेका छन् । लामिछाने र टेलीभिजनका तर्फवाट तयार पारिएको विज्ञापनलाई सामाजिक संजालमा राखेर उनी लेख्छन–‘म चाहन्थें, यतिसम्म द्वन्द्व नभइदिएको भए हुन्थ्यो ! तर अब त यो कार्यक्रम नै कानुनी विषय बन्न पुगेछ ! मेरो साथी रवी र ‘मेरो’ टीभी न्युज २४ दुबैको जय होस् । जय स्वाभिमान !’
हुन त कार्यक्रमको ट्रेडमार्क रवीको स्वामित्वमा रहेको ‘रुचि एण्ड रिया प्रोडक्सन प्रालि’को नाममा रहेको वुझिएको छ । तर, फोन नउठाउँदा रवीसँगको विषय प्रष्ट हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि टेलीभिजनले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि जोशीमाथि वौद्धिता चोरीको आरोप लागिरहेको छ ।